Ahoana ny fiovan'ny takelaka amin'ny fahazarana miantsena | Martech Zone
Asabotsy Jolay 7, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Raha Mpanjaka ny atiny, dia tsy maintsy Mpanjakavavy i UX. Miaraka amin'ny fitomboan'ny finday sy ny takelaka lehibe, ny traikefan'ny mpampiasa (UX) dia mety hisy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fitomboan'ny varotra ivelan'ny kalitaon'ny atiny mihitsy. Ireo traikefa ireo dia tsy azo lavina intsony ary tsy maintsy jerena rehefa mandamina tsara ny fisianao amin'ny Internet ianao.
Ity infographic ity dia avy amin'ny Monetate: Ny tsenan'ny takelaka mitombo dia nahatonga ny fironana hahatakatra ny lanjan'ny hardware rehefa manatsara ny tranokala hamoronana traikefa mpanjifa mifandraika amin'izany. Ity infographic ity dia misy fampahalalana momba ny fahazaran'ny mpiantsena takelaka, ao anatin'izany ny angona tsy miankina sasany avy amin'ilay vaovao Monetate EQ tatitra.
Tags: varotraecommercestatuta fivarotana ipadfiantsenana ipadfihetsika fiantsenana ipadvarotra takelakafiantsenana takelakatcommerce